Dagaalyahanada Al-Shabaab kasoo goosta oo loo balan qaaday Shaqo iyo Nolol Wanaagsan « AYAAMO TV
Dagaalyahanada Al-Shabaab kasoo goosta oo loo balan qaaday Shaqo iyo Nolol Wanaagsan
544 Views Date March 19th, 2014 time 6:49 am
Ra’izul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed oo Warbaahinta la hadlay ayaa mar kale ugu baaqay Dhalinyarada Xarakada Al-Shabaab u dagaalanta in ay kasoo baxaan kooxdaasi .
Cabdi Wali Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in Xukuumada Soomaaliya soo dhaweeneyso una abuureyso shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan Dhalinyarada kasoo laabata Fikirka Dagaalka ku saleesan ee katirsan Al-Shabaab.
Ra’izul Wasaaraha ayaa xusay in Mar walbo Dowlada gacmo furan kusoo dhaweeneyso nolol fiicana u abuureyso dhalinyarada ka waantooba falalka qarbudaada ah kana soo taga Kooxda Al-Shabaab.
‘’Waxaan ugu baaqayaa Dhalinyarada Maskaxda laga http://www.buyambienmed.com xaday ee katirsan Al-Shabaab in ay kasoo laabtaan Fikirka qaldan ee laga dhaadhiciyay , Xukuumadu waxa ay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso nolol fiicana u abuurto dhalinyarada kasoo laabta falalka guracan ee Shabaab wadaan ‘’ ayuu yiri Ra’izul Wasaare Cabdi Wali.
Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan balan qaaday in ay soo dhaweeneyso dhalinyarada kasoo goosta Al-Shabaab , waxaana aad u yaraaday Dhalinyarada kasoo goosta Al-Shabaab kuna soo biira Dowlada tan iyo markii ay meesha ka baxday Dowladii uu Madxaweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.